३ जना भारतीय नक्कली डाक्टर पक्राउ
By नवीन सन्देश on	 १८ भाद्र २०७३, शनिबार १६:५१ · विविध
काठमाडौँ । सिरहाको गोलबजारबाट तीन जना नक्कली भारतीय डाक्टरलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । पक्राउ पर्नेमा भारत विहारको मधुवनी जिल्ला बाबुबडहीका डा. रामजी दास, वंगाल, जलपाइगुडीका सन्तोष मण्डल र कौसिक मिस्त्री रहेका छन् ।
मण्डलले डा. वि वालाकोको नाममा उपचार गर्दै आएको प्रहरीले जनाएको छ । मण्डल र मिस्त्री सँगै बस्दै आएका थिए । वावासिर, हाइड्रोशिल, भोगन्धर, सुराक (सेतोपानी झर्ने) रोगको ठेक्कामा उपचार गर्दै आएको प्रहरीले बताएको छ ।
प्रहरीका अनुसार सामान्य लेखपढमात्र गर्न जान्ने यी डाक्टरहरुले आठ देखि १२ हजार सम्म लिने गरेको बताइएको छ ।